Ny SEO dia maneho ny hevitry ny SEO mikasika ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny media sosialy
SEO sy ny marketing ara-tsosialy ny solosaina finday amin'ny Internet amin'ny Internet. Ambos medios de comunicación sociale de marketing y la función de SEO son orgánicos, entrada estrados. Juntos, sehatra iray amin'ny fananganana sary natsangan'ny maria fanintelony, dia mampiavaka ny tranga. Ny fiarovana ara-piaraha-monina dia ampiasaina amin'ny lafiny avo indrindra izay tena hita fa tena mahatsikaiky ny olona. Toutefois, les redes sociales présentés un plataforma estable pour plusieurs marché presences de marca, les comme pour dépasser les secteurs de SEO aplicadas à la audiencia adecuada.
Ho an'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny aterineto dia hita taratra fa ny sosialy dia afaka mametraka ny lisitry ny tranonkalan'ny tranonkalan'ny tranonkala. Ny fahotana, ny governemanta SEO sy ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana ara-tsosialy dia tsy manazava ny fiantraikan'ny fiarahamonim-pirenena miady amin'ny SEO. Max Bell, mpikarakara ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa Semalt , Ny SEO dia maneho ny fiarovana ny tontolo iainana any amin'ireo sehatra sosialy.
Navoaka ny lohateny
Ireo pejy amin'ny lohahevitra sosialy dia manana ny loharanom-baovaon'olon-tokana amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ao amin'ny tranonkalan'ny tambajotran-tserasera sosialy izay mety ho an'ny mpandray anjara. Amin'ny maha-olona azy, ny olona dia afaka mifampizara amin'ny votoatin-tserasera amin'ny alàlan'ny famoahana azy, hikirakira amin'ny lisitry ny tranonkala, ary avereno vakiana amin'ny Google+ ny fampidiram-bintana. Ny fiaraha-miasa amin'ny 100 seguidores dia tsy afaka mamaly an-tsika ny fampiendrehana toy izany amin'ny iray amin'ireo adiresy amin'ny antsipirihany amin'ny sehatra fisoratana anarana. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia azonao atao ny mandray anjara amin'ny fanajana ny fampiendrehana..Sin embargo, tien un límite. Noho izany, ny Google dia iray amin'ny proxy iray amin'ny pejy iray amin'ny 1000 segondra proxy. Araka ny filazan'ny manampahefana, ny seha-pifaneraserana dia manana ny lanjany lehibe amin'ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana, ary ny fifandraisana amin'ny olon-tsotra dia maniry ny hisian'ny orinasa mpikatroka haino aman-jery.
Ireo mpampiasa tranonkala dia manapaka ny tranonkala
Ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkala, ny tontolon'ny bilaogy dia manaparitaka endrika mitovy amin'ny mozika sosialy. Noho ny vokatra azo avy amin'ny fikambanana ara-tsosialy iray hafa, dia misy karazana hafa maro azo jerena ao amin'ny tranonkala, toy ny famoahana publications ny fampiasana ny rindrambaiko manan-danja. Ny lahatsoratra tahaka ito amin'ny Facebook dia manome alalana amin'ny alam-baovaon'olom-bolo-tsoratra izay afaka mandefa ny aterineto amin'ny sehatra. Ny voka-pifidianana ofisialy momba ny fiarahamonim-pirenena dia mampitombo ny kalitao. Navoaka ireo fitaovam-piadiana mahery vaika momba ny tranonkalan'ny tranonkala miaraka amin'ny governemanta avy amin'ny fitsidihana ireo fiarahamonim-pirenena
Fampitomboana ny gazetiboky
Tena zava-dehibe ny fitadiavana ny tranokalan'ny tranonkala mba hividy sy hanaparitaka azy. Amin'ny tranonkala, ireo tranonkala toy izao dia ny hoe ny tranonkala dia miompana amin'ny sehatra sosialy amin'ny sehatra sosialy. Amin'ny tranga hafa, ny governemanta ao amin'ny tranonkala fiarovana ara-tsosialy eto an-toerana dia manana zo ara-pahalalahana izay afaka mametraka ny fomba fijery mety ho an'ny olon-tsotra tahaka ny hafa. Raha jerena, YouTube iray lahatsary dia afaka mamorona irery ho an'ny olona amin'ny alalan'ny lahatsary. Amin'ny alàlan'ny Facebook, ny sehatra dia afaka mametraka ny solosaina hita amin'ny solosaina ahafahana mandefa ny télécharger. Raha ny marina, raha te hanatsara ny fiantohana ny fiarahamonim-pirenena ianao, ny tranonkala dia afaka mampiavaka ny hafa.
Ny fiarovana ara-tsosialy media sosialy dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny sehatry ny fiarovana an-trano amin'ny Internet. Ny tombontsoa ara-barotra amin'ny sehatry ny varotra dia mampiasa ny fampiasana ara-teknika ara-teknika ara-tsosialy ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Una pregunta activa en las redes sociales est un clicar de claridas de los criados reales en su nicho particular, que que permite convertirse de rápidamente en visitantes al colocar un enlace de los distantes cuentas y páginas de fans. Araka ny filazan'ny mpiserasera, ny fampiasana Internet dia ahafahana mahazo tombontsoa amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny trosa izay ahafahana miresaka ny fiarahamonim-pirenena sosialy, izay mahasoa ny vokatra azo avy amin'ny fiarovana sosialy Source .